I-Sharp Aquos R2: I-high-end entsha kunye ne-Snapdragon 845 kunye nekhamera egxile kuphela kwividiyo | Androidsis
I-Sharp Aquos R2: Isiphelo esitsha esine-Snapdragon 845 kunye nekhamera egxile kuphela kwividiyo
Ingxilimbela yobuchwephesha yaseJapan iSharp ibonise iSharp Aquos R2. isixhobo esitsha esineenkcukacha eziqhelekileyo kunye neempawu zoluhlu oluphezulu. Kwaye kukuba, ngenxa yeprosesa enamandla ye-Qualcomm Snapdragon 845, i-chip yamva nje ephuhliswe yi-American, kunye namanye amacandelo, le smartphone, ngaphandle kwamathandabuzo amancinci, iza kukhuphisana ngokuchasene neyona nto inzima kwabanye abavelisi.
I-Aquos R2 iza ixhotyiswe ngeempawu ezinqwenelekayo kunye neempawu Apho ime khona, ukongeza kwi-SoC, inzwa enikezelwe ngokukodwa ukurekhoda iividiyo kwizigqibo eziphezulu. Le ayisiyonto iqhelekileyo, kwaye inyani yeyokuba ifem ijonge ukugubungela icandelo lentengiso ephathwayo apho kukho abo basebenzisi bathanda ukurekhoda kunye nokugcina umzuzu ngamnye kumgangatho obalaseleyo. Sinikela kuwe!
Le fowuni iza nescreen esikhulu se-6-intshi sediagonal ye-IGZO IPS yetekhnoloji ene-3.040 x 1.440 pixels isisombululo (WQHD) ilungelelaniswe kwindawo engaqhelekanga kunye ne-slim 19: 9 i-aspect ratio. Oku ke, kunoyilo lwenotshi.
Ngaphakathi, kanye njengoko besesitshilo, Ixhaswe yi-octa-core Qualcomm Snapdragon 845 chip (4x Kryo 385 e-2.8GHz + 4x Kyro 385 e-1.8GHz) ene-architecture ye-64-bit kunye ne-10 nanometers kunye ne-Adreno 630 GPU.. Ukongeza, ine-4GB LPDDR4X ye-RAM, imemori yangaphakathi ye-64GB enwebekayo nge-microSD ukuya kuthi ga kwi-400GB umthamo, kunye nebhetri eyi-3.150mAh enenkxaso yokuTshaja ngokukhawuleza kwe-4+ ukutshaja ngokukhawuleza.
Ngokubhekisele kwicandelo lokufota, Iza ixhotyiswe ngekhamera yangasemva ephindwe kabini apho i-sensor ye-16.3MP inikezelwe kuphela ukurekhodwa kweevidiyo ze-135 ° ububanzi kwisisombululo ukuya kuthi ga kwi-4K.; Ukongeza, inozinzo lwentshukumo ukunciphisa ukungcangcazela okubangelwa sithi ngexesha lokurekhoda. Kuyo, inenye inzwa ye-22.6 megapixel ene-AI yokuthatha iifoto, kwaye, ngaphambili, kwinotshi, ii-selfies kunye nokuqondwa kobuso, i-16.3MP yokudubula ene-AI yokwenza izithonga zintle..
Phakathi kwezinye izinto, iSharp Aquos R2 inomfundi ongasemva weminweIsebenzisa i-Android 8.0 Oreo njenge-OS, kwaye inesatifikethi se-IPX5 / IPX8 esiyikhusela emanzini nothuli.
Sharp Aquos R2 ixabiso kunye nokufumaneka
Inkampani yaseJapan ayizange ibhengeze ixabiso okanye umhla wokuqaliswa kwemarike ngexesha lokuboniswa kwale fowuni. Sekunjalo, kusenokwenzeka ukuba sinokufumanisa kwiveki ezayo. Iyaphuhlisa ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Sharp Aquos R2: Isiphelo esitsha esine-Snapdragon 845 kunye nekhamera egxile kuphela kwividiyo
I-360 N7, ibanga eliphakathi kunye nebhetri enkulu ye-5030mAh iphehlelelwe
Zonke iindaba ezivela kwiifoto zikaGoogle ezivezwe kuGoogle I / O 2018